sosegado : ပုံပြင်မဟုတ်တဲ့ ငါ့ရဲ့မှတ်စု (ဒုတိယပိုင်း)
Posted by sosegado at 2/28/2010 12:43:00 PM
ဒုတိယပိုင်းလည်း သိပ်ကောင်းတာပဲဗျာ။ ပထမပိုင်းက မင်းသားလေးနဲ့ ဇာတ်လမ်းဆက်မယ်ထင်ထားတာဗျ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပြီ။ စိတ်ဒဏ်ရာရထားတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ထဲကို လှမ်းမြင်ရတယ်ဗျာ။ အားပေးလျက်ပါ။
စိတ်ဒဏ်ရာရဘူးတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားချက်ကို နားလည်မိတယ် အစ်ကို့ရေ...ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာဦးမှာလဲ...အစ်ကိုက တော်တော်လေးကို အသေးစိတ်ရေးနိုင်တာပဲ...စောင့်ဖတ်ရကျိုးနပ်ပါတယ်...
ခံစားရပါတယ်၊ ဇာတ်ကတော့ ကောင်းသထက်ကောင်းနေပြီ၊
ကဗျာတွေထည့်ထားတာလဲ မိုက်တယ်၊ တစ်ခုပဲ ‘ချပ် စလူးစွတ် ဂျက်’ ဘယ်လိုမြည်..
ထင်သလို မဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်၊ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားမူပေါ့ zaw zaw
အဲဒီ ဇာတ်လေး အခြေခံလာပုံကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်...အသေးစိတ်ပြီး ယုတ္တိရှိတော့ ဇာတ်လမ်းက ကြွနေတယ်...စောင့်ဖတ်ပါ့မယ်ရှင်...:)
ပထမပိုင်းပြီးတော့ ဒုတိယပိုင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ ခံစားရပါတယ်၊ စောင့်ဖတ်ရကြိုးနပ်ပါတယ်၊ Ko Oo
ဖတ်လိုက်ရတာ တဝကြီးဘဲ ဘဝတခုပေါ့နော် တကယ် အဖြစ်အပျက်ထင်တယ် ... စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်..
သိပ်ကောင်းတဲ့ ကဗျာလေး အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်...
ဖတ်ဖြစ်တယ် ဆက်အားပေးရမှာပေါ့း)
ဒုတိယပိုင်းပြီးမှ ပထမပိုင်း သွားဖတ်တာ၊ တတိယပိုင်း စောင့်ရဦးမယ်၊ တကယ် အဖြစ်အပျက်လိုလို ဇာတ်သိမ်းရှိပါမလား၊ ဇာတ်သိမ်းကိုမျှော်နေမယ်၊ မီးမီး
ဒုတိယပိုင်း ကနေ စပြီး ဖတ်ဖြစ်တယ်။ ဖတ်ကောင်းလွန်းလို့ ပထမပိုင်း ရှာပြီး ဖတ်ရအုံးမယ်။ ကဲ.. တတိယပိုင်း စောင့်မျှော်နေပါသည်.... (စာအရေးအသာ.. ဇတ်အိမ်ဖွဲ့စည်းမှု့နဲ့ စွဲဆောင်မှု အား အရမ်းကောင်းမွန်ပါကြောင်း.......
I am thinking……
Mr. Right for her is??
ဖတ်နေရင်း တကယ့်ကိုယ့်အဖြစ်ကို ရေးထားတယ်လို့ ထင်မိတာ
ဒိုင်ယာရီလေးတစ်ခုကို အသေးစိတ် ဖတ်ရသလိုဘဲ.
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ တူတူဖူးတဲ့ အချိန်လေးကိုသတိရလိုက်တာ.........................
ဒုတိယပိုင်းတစ်ဝက်လောက် ဖတ်ပြီးမှ ပထမပိုင်းသွားဖတ် ဒုတိယပိုင်း ပြန်ဖတ်ဖြစ်တယ်
ဇာတ်လမ်းရော၊ စာရေးတာရော ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ဗျ
i 'll be waiting4the coming post
ကွန်ပျူတာ ကီးဘုတ်ခေါက်သံ ခိုညည်းသံထက်တောင် မုန်းတီးမိပေမယ့်
့အပိုင်း ၃ မျှော်နေပါသည်။
ပုံပြင်မဟုတ်တဲ့ မှတ်စုကို ဖတ်ရတာ ရင်ထဲ ထိထိခိုက်ခိုက်နဲ့ မောသွားတယ်။ အသေးစိတ် ခြယ်မှုန်းထားတာလေးတွေက တကယ့်အဖြစ်အပျက်လို့ ခံစားရတယ်။ စိတ်မကောင်းဘူး။
သန်လျင်ရဲ့ နေရာတွေကို ဖတ်ရတော့ သန်လျင်မြို့ကို ပြန်သတိရမိသေးတယ်။
မြို့လယ်က ဆီချက်ဆိုင် တွေ ကုန်စုံဆိုင်
ဆိုတော့ မျက်လုံးထဲ ပုံဖော်ကြည့်မိတယ်။
ကျနော်လည်း သန်လျင်မြို့လယ် မှာ မွေးခဲ့တာပါပဲ။
တကယ့် အဖြစ်လို့ ထင်စေလောက်အောင်